आज साउन १९ गते शनिबार, यी ७ राशिका लागि फाइदा...यी राशिलाइ खतरा! - Internet Khabar
आज साउन १९ गते शनिबार, यी ७ राशिका लागि फाइदा…यी राशिलाइ खतरा!
August 4, 2018 Internet Khabar
आज तपाइको राशिमा सकारात्मक चन्द्रमा रहेको छ । आर्थिक संकट हटेर जाने छ भने आर्थिक क्षेत्रमा केही राम्रो अवसर मिल्न सक्छ। मनको चिन्ता हटेर हुनेछ। स्वास्थ्य राम्रो रहने छ। कुनै नयाँ कामको योजना बनाउनु भएको छ भने आज तपाईंलाई निश्चित रुपमा सफलता मिल्ने योग रहेको छ । व्यापार व्यावसायमा उन्नति हुनेछ भने दाम्पत्य जीवन पनि आनन्दमय रहनेछ । आज तपाईंको धेरैजसो काममा सफलता मिल्नेछ।
आज तपाइको उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसँग हेलमेल बढ्नेछ। आय व्यायमा बराबर सन्तुलन रहनेछ। स्वास्थ्यका हिसाबले आजको दिन कमजोर रहेने देखिन्छ। जीवन प्रति तपाइको सकारात्मक विचार रहने छ। साहित्य तथा संगीतमा तपाइको मन जानेछ । आज तपाइ कुनै काम एक्लै गर्न लाग्नु भएको छ भने राम्रो अवसर पनि तपाइको हातबाट गुम्न सक्छ । राजनीति र आर्थिक कारोबारका विषयमा कसैसँग वादविवाद तथा लेनदेन नगर्नु नै तपाइका लागि वेश हुनेछ।
मिथुन राशिका लागि आजको दिन राम्रो रहेको छ । आर्थिक कारोबारमा फाइदा हुन सक्छ । नोकरीको क्षेत्रमा केही शुभ खबर मिल्न सक्छ । ढिलासुस्ती पनि आज तपाइलाइ धेरै फाइदा मिल्ने योग रहेको छ । जरुरी काम आज गरेमा अवस्य फाइदा मिल्नेछ । बिजनेस व्यापारमा साथीभाइको सर सहयोग मिल्नेछ, सोचेको काममा सफलता मिल्नेछ भने जीवनसाथीसँगको सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ । सामाजिक प्रतिस्ठा बढ्ने छ। आजको दिन तपाइ ज्यादा भावुक पनि बन्न सक्नुहुनेछ भने स्वास्थ्य स्थिति तपाइको लागि शुभ नहुन सक्छ, पेटको रोग बढ्ने योग छ विचार पुर्याउनु राम्रो होला।
आज तपाईं सामाजिक सेवामा लाग्ने योग रहेको छ । काममा सकारत्मक परिणाम तपाईंलाई मिल्ने छ । तपाईं नियमकानून तथा आफ्नो जिम्मेवारीमा समर्पित रहनुहुनेछ । तपाइ आज सही योजना बनाएर सही दिशामा अगाडि बढ्न सफल रहनुहुनेछ । पुराना मित्रहरुसँगको भेटघाटले मन खुशी रहन सक्ने छ । पारिवारिक झै झमेलाबाट मुक्ति मिल्नेछ। सानातिना रोगले सताउने योग पनि रहेको छ।
आज तपाईंलाई लगभग सबै काममा सफलता मिल्ने योग रहेको छ। आजको दिनमा सबैखाले मानिसहरु तपाईंबाट प्रवावित हुने छन् । रहस्यमय तथा गुप्त विद्या जान्ने मन रहने छ । धार्मिक क्षेत्रमा मन जाने छ । सन्तान सुख प्राप्त हुने छ भने जागिरमा पनि उन्नति हुने योग रहेको छ । भौतिक सुख सुविधा एवम् धनलाभको योग बनि रहने छ । आज तपाईंलाई जग्गाजमीनबाट पनि फाइदा मिल्ने छ। कुनै अल्झिएका मुद्धा मामला छन् भने आज सुल्झन सक्ने छ। स्वास्थ्यमा पनि सुधार हुने देखिन्छ । गम्भीर रोगबाट पीडितहरुका लागि आज समय कष्टकर छ ध्यान दिनु होला।
तपाईको गोप्यकुरा कसैले भङ्ग गरिदिन सक्छ। आफ्नो गोप्य कुरा कसैलाई नबताउनुहोला। नयाँ चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला समयमै विचार पु¥याउनु होला । आफ्नो क्षमता देखाउने सही समय आएको छ । पैतृक सम्पतिको मामला आज सुल्झन सक्ने छ । पैतृक सम्पतिबाट फाइदा मिल्ने योग छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाइको आज त्यती शुभ दिन छैन। पुराना रोगहरुले आज तपाइलाई दुःख दिनेछ खानपानमा विचार पुर्याउनु होला।
आर्थिक क्षेत्रमा चाँडैनै सुधारको योग रहेको छ। अर्थसँग सम्बन्धित केही ठुलै कारोबार हुन छ । सानोबाट सुरु गरेको काममा बढि फाइदा मिल्नेछ । तपाइको कामको तारिफ हुनेछ । आयआर्जन पनि राम्रो हुने योग रहेको छ। दाम्पत्य जीवन सुखमय बन्ने छ । व्यापारमा धेरै किसिमका सहयोग मिल्नेछन् भने तपाइको मन प्रशन्न रहेन छ। जोर्नीको दुखाइले आज तपाइलाई सताउने छ सावधान रहनुहोला।
आजको दिन तपाईका लागि विभिन्न समास्याहरु सजिलै समाधान गर्न सकिनेछ। जुनसुकै काम गर्दा अरु व्यक्तिको साथ सहयोग तथा साझेदारीमा गर्नुहोला। तपाईलाई सकारत्मक परिणाम तथा पुरस्कार मिल्न सक्छ । आज तपाइ जीवनसाथीको अपेक्षाहरु पनि पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। कानुनी क्षेत्रमा पनि तपाइलाइ सफलता मिल्नेछ । अचानक मनोरञ्जनको अवसर पनि मिल्ने योग रहेको छ । आपूmले नसोचेका काम पनि पुरा हुनेछन्। मावली पक्षबाट आज तपाइलाइ सहयोग मिल्ने छ । यसका बाबजुत पनि तपाइलाई मानसिक तनाव हुन सक्ने छ भने पेटसम्बन्धी समस्याहरुले दिनभर सताउनेछ । खानपानमा विचार पुर्याउनु राम्रो होला।
समयले साथ दिनेछ । भाइबन्धु तथा मित्रहरुबाट सर सहयोग मिल्नेछ । गोचर कुण्डलीमा चन्द्रमा पाँचौं भावमा रहेको छ जसले अचानक धनलाभ हुन सक्छ । आज तपाईको सामु सफलताका लागि प्रशस्त मौकाहरु मिल्ने योग रहेको छ। अरुको खातिर पनि तपाइले केही त्याग गर्नपर्ने देखिन्छ । तर यो त्याग आउने समयमा तपाइको लागि फाइदाजनक हुनेछ। सन्तान सुख प्राप्त हुनेछ भने सबैतिरबाट आज लाभको योग रहेको छ।
तपाइको सोच व्यवहार हरदम सकारात्मक रहने छ। आत्मविश्वास बढ्नेछ। आज जे गर्नुहुन्छ धेरै सोचेर शान्तिपूर्ण ढंगले काम गर्नुहोला। अन्य काममा अरुलाइ आफ्नो वशमा ल्याउन सफल हुनुहुनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सुधार आउनुका साथै सुख शान्ति मिल्नेछ।
आर्थिक तनावबाट मुक्ति मिल्ने योग रहेको छ। तपाइको आशाको किरण सत्यसावित हुन सक्नेछ। धन लाभको योग रहेको छ । धनलाभ हुनेबितिकै उधारो चुक्ता गर्नुहोला। आज मिल्ने पैसा यसरी लगानी गर्नुस कि जसले भविस्यमा फाइदा मिल्न सकोस्। विजनेस व्यापार गर्नेहरुका लागि आजको दिनमा विशेष सफलता मिल्नेछ। शारीरिक तथा मानसिक तनाव महसुस हुने छैन। साथीभाइबाट पर्याप्त सहयोग मिल्ने छ । जुन काममा मेहेनत गर्नुहुन्छ त्यसकामबाट शीघ्र लाभ मिल्नेछ भने त्यसबाट धन लाभ पनि हुनेछ । एसिडिटीले केही सताए पनि आजको दिन तपाइका लागि उत्तम रहेको छ।
व्यापार व्यावसायबाट नाफा हुनेछ। व्यावसायमा विशेष बदलाव आउने योग रहेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा तपाई चतुर सावित हुन सक्नु हुनेछ । आजको दिन व्यस्त रुपमा बित्नेछ भने नयाँ चुनौती र जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुपर्ने छ । शारिरीक समस्याका कारण आत्मविश्वासमा कमी आउने छ। शत्रु देखि सावधान रहनुहोला। पुराना रोगहरुले सताउनेहुँदा स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला।
बिहानै नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डमा पहिरो, यातायात अवरुद्ध
एकै रातमा पाकिस्तानका १२ वटा विद्यालयमा हिंसात्मक आक्रमण
आजको राशिफल – मिति २०७४ साल भदौ २७ गते सप्तमी तिथि मंगलबार
आजको राशिफल – मिति २०७४ साल भदौ १५ गते दशमी तिथि बिहीबार
आजको राशिफलः २०७५ असार २७ गते बुधबार